Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay heshay diyaaradihii ay ku howl geli laheyd Somali Airline | Somaale.com
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay heshay diyaaradihii ay ku howl geli laheyd Somali Airline
Dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay heshay ilaa afar diyaaradood oo ay ku howl gelineyso Shirkadii Somali Airline, muddo labaatan sano kadib inay dib u bilowdo duulimaadyadii caalamiga ahaa.
Wasiirka Warfaafinta, Boostada, Isgaarsiinta iyo Gaadiidka C/llaahi Ciilmooge Xirsi ayaa sheegay inay rajo ka qabaan inay dib u howl geliyaan Shirkadii Somali Airline ka hor inta aanu dhamaan sanadkan.
Mr Ciilmooge ayaa sheegay in ilaa afar diyaaradood ay u heleen balan qaad shirkadii Somali Airline, isla markaana qorshuhu yahay inay howl geliyaan inta sanadkan aanu dhamaan.
“Afar diyaaradood ayaa hada balan qaad u heysanaa inay howl galaan, waxaan rajeynayaa in sanadkan inta aanu dhamaan inaan howl gelino Somali Airlines, sida qorshuhu yahay haduu alle idmo”ayuu yiri Wasiir Ciilmooge.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in howlo kale ay socdaan, isla markaana ay qeyb qeyb u soo celinayaan howlihii shirkadii Somali Airline oo ay ka mid tahay in guryihii ay laheyd laga baxo, isla markaana ay ku wargeliyeen dadkii degenaa.
“Howlo kale waa inoo socdaan, laakiin guud ahaan diyaarado waan helnay, duuliyeyaal waa la xiriirnay, qaar liiskooda waan helnay, rajo weyn in ayaa ka qabnaa in Soomaaliya mar kale aragto diyaaradii calankeeda wadatay ay ka kacdo garoonka Aadan Cadde”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta, Boostada, isgaarsiinta iyo Gaadiidka.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku howlan sidii ay dib ugu howl gelin laheyd muddo labaatan sano kadib shirkadii Somali Airline, iyadoo dhowaan dowladdu ay soo bandhigtay shuruucda shirkadaha diyaaradaha dalka.
Barnaamijka Higsiga Cusub ee (New Deal ) ayaa maaanta ka furmay Magaalada Galkacyo ee Maamulka Gal-mudug
Madaxweynaha Kenya Kibaki: Waan xoojinayna iskaashiga aan la leenahay Soomaaliya 0